Tandremo ny fizahana antontan-taratasy macOS Sierra iCloud vaovao | Avy amin'ny mac aho
Izahay tsikelikely milaza zavatra momba ny vaovao momba anao izahay macOS Sierra. Efa tao amin'ny lahatsoratra teo aloha izahay dia niresaka momba ny fomba fiasa vaovao azo hahetsika raha vantany vao apetraka ny macOS Sierra. Izahay dia miresaka momba ny mety fisian'ny misy ankehitriny ahafahanao mahazo miditra na aiza na aiza miaraka amin'ny fitaovanao iOS na avy amin'ny Mac rehetra izay idiranao miaraka amin'ny Apple ID mankany amin'ireo fisie ao amin'ny folder Documents sy ireo rakitra anananao eo amin'ny birao.
Amin'izany fomba izany dia ampidirin'i Apple ny fahafaha-mitahiry vola bebe kokoa amin'ny habaka nifanarahanay tamin'ny rahona iCloud. Na izany aza, rehefa avy nampiasa io fampiasa vaovao io nandritra ny roa andro, Tsy maintsy mampitandrina anao izahay ny amin'izay mety hitranga aminao raha mampandeha azy ianao izao ary manapa-kevitra ny tsy hampiasa azy io intsony.
Rehefa mametraka macOS Sierra ianao, ny zavatra voalohany anontanian'ilay rafitra vaovao anao rehefa manomboka voalohany dia raha te hampihetsika ny fitehirizana rakitra avy amin'ny folder Documents sy Desktop ao amin'ny rahona iCloud isika. Voafidy ny safidy ka raha ekentsika izany dia hapetraka ao amin'ny rahona Apple ny rakitra rehetra. izay anananao amin'ny toerana roa.
Ao amin'io hafatra io ihany dia ampahafantarina anao ny habaka izay hipetrahan'ireo fisie ireo ao amin'ny rahona iCloud. Tokony hojerentsika izay drafitra fitahirizana izay nifanarahana tamin'ny iCloud mba tsy hihoatra ny rano rehefa manomboka mampakatra rakitra. Etsy ankilany isika dia mila mandray an-tanana izany Ahoana raha manana solosaina marobe misy macOS Sierra ny zavatra ataontsika Ary navadika io safidy io, ny zavatra hitranga dia ny fampifangaroana ireo lahatahiry Documents sy Desktop an'ny solosaina roa tonta mba hahafahanao hanana rakitra mitovy azo idirana.
Ankehitriny, holazaiko aminao ny zava-nitranga tamiko. Rehefa nanao ny fametrahana ny rafitra aho dia nanaiky ity fomba fiasa vaovao ity hitsapana azy io ary ny 3,88 GB izay tamin'izany fotoana izany dia nanana an'ireny lahatahiry izay efa nolazaiko tamina fotoana maro ireny dia nanomboka nampiditra ho azy. Rehefa vita ny fampidinana ireo rakitra rehetra dia nanapa-kevitra ny handeha aho Safidin'ny rafitra> iCloud> iCloud Drive ary alefaso ny safidy Desktop sy folder fisie ary gaga aho fa rehefa nanapa-kevitra ny hamono ilay fitaovana nampandrenesina anay izahay fa ny rakitra dia hesorina amin'ny solosaina, na amin'ny Documents na amin'ny Desktop ary hijanona tsy ho hita ao amin'ny iCloud ihany izany. Toy izany koa, ampandrenesina ny mpampiasa fa tsy hamafana ireo antontan-taratasy iCloud raha toa ka tsy mamafa azy ireo amin'ny iCloud ny mpampiasa.
Mitandrema ihany satria raha feno ny rakitrao ny solosainao ary misy dika mitovy amin'ny zava-drehetra natao tao amin'ny iCloud, raha tsy hofidinao io safidy io dia hesorina tsy avy amin'ny iCloud fa avy amin'ny solosainao eo an-toerana. Hanohy hizaha toetra ity fomba fiasa vaovao ity izahay, saingy heveriko fa rehefa mandeha ny fotoana dia tsy maintsy manova ny fomba fampiasana azy i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Tandremo ny fampifangaroana antontan-taratasy iCloud vaovao ao amin'ny macOS Sierra
Ok novakiako eto ny valin'ny fanontaniako amin'ny lahatsoratra hafa 😉 misaotra anao nilaza izany, arahaba
Nitranga tamiko izany, azo vahana amin'ny fomba hafa ve? Manana kopia voafafa aho saingy efa herinandro maromaro lasa izay ka manana antontan-taratasy vaovao izay tsy hita ao amin'ireo kopia ireo aho ary mila tazomiko. Misafotofoto 🙁 mazava ho azy fa tsy maintsy hamahana an'ity olana ity izy ireo satria tsy voakarakara tsara. Te-hamerina ireo rakitra ao anaty lahatahiry mifanaraka aminy ao amin'ilay mitady aho fa tsy amin'ny kapila iCloud. Raha hainao ny manamboatra azy dia lazao aho.
Ines, raha ny marina dia tsy namoy na inona na inona ianao. Izy io dia namindra ny "Documents" sy "Desktop" (miaraka amin'izay rehetra ao anatiny) ho any amin'ny toerana "iCloud", saingy io ihany no nifindra. Ho hitanao ao izy ireo. Fa eny, marina ny anao, satria tsy nanazava tsara ny fandehany izy ireo ary nahazo tahotra goavambe tamin'ny voalohany ...
Raha mametraka macOS sierra aho, afaka mamafa ny rakitra rehetra ve aho raha tsy manao kopia backup na afaka mametraka azy tsy misy olana toy ny fanavaozana ny lozisialy?
mlazarom dia hoy izy:
Fa azoko atao ve ny manao zavatra hampiverina azy ireo ao amin'ny Finder? Tsy tiako izany amin'ny iCloud.
Mamaly an'i mlazarom
Raha tsy ny Finder no ampiasako ny app Path Finder dia afaka mahita ny fampirimana Documents amin'ny solo-sainako aho fa tsy amin'ny rahona, ary rehefa manokatra fisie ao anaty rahona aho dia miseho indray ao amin'ny fampirimana antontan-taratasy amin'ny solosaina, izay hita ao amin'ny Path Finder ihany. Tsy haiko na vahaolana io na ny antontan-taratasy rehetra amin'ny solosaina dia hanjavona indray mandeha rehefa manidy azy ireo aho na tsy mampiasa azy ireo mandritra ny fotoana kelikely.
Naleoko lavitra ny rafitra taloha amin'ny fananana azy ireo amin'ny Mac sy fanavaozana azy ireo ao amin'ny iCloud.
Salama! Nofoanako ny fampidinana teo afovoany ary ankehitriny dia tsy miseho amin'ny iCloud na iMac izy ireo. Inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Emilia
Pauli dia hoy izy:
Salama, fanontaniana iray: nohavaoziko tany Sierra ny Mac ary tsy afaka miditra amin'ny anarako intsony aho satria apetrako ny teny miafiko .. manomboka feno izany ary mikatona foana… inona no hataoko?
Valiny tamin'i Pauli
Alejandro Estrada dia hoy izy:
Nofoanako ny ICLOUD ary namafa ny rakitra DESKTOP rehetra aho, tsy manana backup na inona na inona aho .. inona no azoko atao? Mila fanampiana aho, izy ireo no horonantsarin'ny asako ary maika ny hahitako azy ireo 🙁
Valiny tamin'i Alejandro Estrada
Gleny dia hoy izy:
Salama hariva dia manavao ny rafitry ny My MacBook Air amin'i McOS Sierra aho ary mahita ny tenako fa gaga fa nanjavona ny ankamaroan'ny sariko, misy ny lahatahiry fotsiny ary foana tsy hitako izay hatao fa tsy mahita na inona na inona aho, azonao atao ve izany ampio aho hampifantoka ahy amin'izay hataoko
Misaotra betsaka anao aho
Valiny tamin'i Gleny
Ny nataoko mba hitazomana azy ireo amin'ny solosaina sy ao anaty rahona dia ireto manaraka ireto (na dia mety ho vitsy kokoa aza ny dingana, fa izany no nataoko):
- Ampandehano ny fampifanarahana
- Andraso ny rakitra rehetra alaina samirery amin'ny solosaina (Hita amin'ny Finder ny fandrosoana)
- Esory ny boaty eo ambanin'ny fitahirizana Optimize amin'ny Mac, avelao ny syncing ho afaka.
Afaka niditra tamin'ireo antontan-taratasy avy amin'ny solosaina aho tamin'ny alàlan'ny fandefasana azy tsy misy Wi-Fi, ka heveriko fa voatahiry ao izy ireo. Ilay snapshot koa dia mitahiry ho voatahiry ao amin'ny iCloud
Salama .. Ahoana ny fomba hidirako amin'ireo rakitra alefako any iclud, tsy haiko izay rindranasa hampiasaina hahitako azy ireo
Ale C dia hoy izy:
Salama! Izaho dia nanana olana mitovy amin'izany, ankehitriny dia manana OS Catalina aho. Nanaraka ny torolalana napetrako eto aho (x System Prefers> iCloud> iCloud Drive ary esory ny safidin'ny Desktop sy Documents Folders). Nomeko OK ilay angano fa hamafana amin'ny solo-sain'izy ireo izy ireo. Ary nofafako avy eo amin'ny sisin-dàlan'ilay nahita ny fisian'ireo antontan-taratasy sy ny birao ary nisy fampirimana antontan-taratasy niseho tamin'io bara io ihany fa efa teo amin'ny solosainako. Avy eo aho nahazo ny angano fa raha te hamafa ireo antontan-taratasy avy amin'ny iCloud aho dia tsy maintsy misintona ireo fampirimana avy ao amin'ny folder iCloud mankany amin'ny folder Documents ao amin'ny solosainako. Nataoko izany ary tsy nisy olana. Tsy nisy voafafa ary ny zava-drehetra dia tsy navotsotra ho iCloud intsony. 🙂
Valiny tamin'i Ale C
Ana Zamora dia hoy izy:
Izany no nanjo ahy ary ankehitriny ao amin'ny Icloud daholo ny fisie ko. Misy fomba iray hamerenana ny lahatahiry manontolo amin'ny birao nefa tsy mila misintona ny rakitra tsirairay avy amin'ny iCloud ianao?
Valiny tamin'i Ana Zamora